गण्डकी | दर्पण दैनिक
पोखरामा १० हजार बढी मतगणना : कसकाे कति ?
२०७९ जेष्ठ २ गते १२:२७
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा १० हजार ४९३ मत गणना सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म भएको मतगणनाअनुसार एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले ४११० मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले ३०८३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
पोखरा महानगरमा ८ हजार ६९३ मत गणना हुँदा समाजवादीका आचार्य अगाडि
२०७९ जेष्ठ २ गते ०९:५७
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा समाजवादीको अग्रता रहेको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार ८ हजार ६९३ मत गणना हुँदा मेयरमा पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा समाजवादीका धनराज आचार्यले ३ हजार ४६५ मत लिएर अग्रतका कायम गरेका हुन् ।
पोखरा महानगरमा ८६९३ मत गन्दा, कसकाे कति ?
२०७९ जेष्ठ २ गते ०६:०९
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका धनराज आचार्यले अग्रता कायमै राखेका छन् । अहिलेसम्म ८६९३ मत गन्दा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार धनराज आचार्यले ३४६५ मत ल्याएका छन् ।
गोरखा नगरपालिका ३ काे अध्यक्षमा एमालेका चुलबहादुर कुँवर विजयी
२०७९ जेष्ठ १ गते ०८:२४
गाेरखा । गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा नेकपा एमालेका चुलबहादुर कुँवर बिजयी भएका छन् । उनले १०१२ मत पाएर बिजयी बने भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार केदारबाबु बस्नेतले ८४३ मत ल्याए ।
पोखरामा एकीकृत समाजवादीका धनराजलाई सय मतको अग्रता
२०७९ जेष्ठ १ गते ०७:३१
पोखरा । पोखरा उपमहानगरको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यले अग्रता कायमै राखेका छन् । साँझ ६ बजेसम्म वडा १, २, १२ र २३ को ३५ सय मत गनिसकिएको छ। त्यसमध्ये गठबन्धनका उम्मेदवार धनराजले १ हजार ३४९ र एमालेका कृष्ण थापाले १ हजार २५० मत प्राप्त गरेका छन् । उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटले १ हजार ४५० र एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङले १ हजार ४०५ मत पाएका छन् ।
पोखरामा २४०० मत गणना हुँदा कसकाे कति ?
२०७९ जेष्ठ १ गते १२:१०
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार धनराज आचार्यले मतअन्तर बढाएका छन् । २ हजार ४०० मत गणना हुँदा आचार्य एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापाभन्दा ११७ मतले अगाडि छन् । एकीकृत समाजवादीका आचार्यले ९२३ र एमालेका उम्मेदवार थापाले ८०६ मत पाएका छन् ।
पोखरामा १७०० मतगणना हुँदा धनराजले मतान्तर बढाए
२०७९ जेष्ठ १ गते १०:४५
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्यले मतान्तर बढाएका छन् । कुल एक हजार ७०० मतगणना हुँदा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार बनेका आचार्यले ९०३ मत ल्याएका छन् ।